Qalab weyn oo saacad bilaash ah leh oo leh ACW: Amaid Clock Widget | Androidsis
ACW: Amaze Clock Widget, widget saacad bilaash ah oo loogu talagalay Android-kaaga oo aadan ka maqnaan karin
Mid ka mid ah tayada ugu wanaagsan ee wijidkaan saacadda ah ee aan u keenayno Androidsis waa awoodda ay u leedahay in dhowr wijetro ah laga helo shaashadda desktop-ka si markaa, marka aan jaleecno, aan awoodno ogow waqtiga qaybaha kala duwan ee meeraha, maaddaama aan u qaabeyn karno inay na tusto waqtiga gobolka aan dooneyno.
Marka laga reebo muuqaalkan weyn, waxaan wajaheynaa a widget wax iska beddeli kara iyo tan wuxuu ina siiyaa shaqooyin gaar ah taasi waxay sahlaysaa in laga takhaluso. Waxaad horeyba u ogayd halganka in la kala doorto barnaamijyada ama aalado isku mid ah, sidaa darteed waa inaan u dirnaa jirridda xusuusta kii waqti fiican ku qaatay miiskeenna Android si aan ugu faraxno midka cusub ee hadda la doonayo mid. ACW: Amaze Clock Widget wuxuu halkan u joogaa inuu ku sii jiro shaashadda taleefankaaga Android, aan aragno sababta.
1 Waan fureeyaa ama ma tirtiraa
2 Qalabka saacad weyn
Waan fureeyaa ama ma tirtiraa
Iyada oo leh barnaamijyo iyo aalado aad u tiro badan way adag tahay in mid la go'aansado, iyo mararka qaarkood waxaan qaadanaa daqiiqado yar go aan ka gaarida hadii aan rakibeyno kan cusub, ama ka tirtir kii hore, ama maxaa diidaya, hayaa labadoodaba maxaa yeelay mid ayaa ii shaqeynaya tan iyo tan tan kale. Halkan ACW Clock Widget ayaa laga yaabaa inay soo gasho, maaddaama aan wajaheyno barnaamij wanaagsan oo ah saacad widget ah oo isku dayi doonta inay hubiso in shakigaas uusan qaadan waqti dheer ugu dambeyntiina aad go'aansato rakibideeda.
ACW Clock Widget waxaa soo saaray xubin kamid ah golayaasha caanka ee XDA, xsmile71, iyo barnaamijku wuxuu leeyahay in ka badan 30 wijetro, oo 17 ka mid ahi ay lacag la'aan yihiin, oo iyagu waa kufiican yihiin inay noo sheegaan waqtiga uu yahay iyo sida cimiladu noqon doonto maalmahan. Oo yaanan ilaawin inay leedahay astaamo aad u xiiso badan sida inay awoodaan inay doortaan goobta, maalinta iyo waqtiga, dhacdooyinka kalandarka, boqolkiiba heerka batteriga, alaarmiga iyo waxyaabo kaloo badan.
Mid kale oo ka mid ah fursadaha waaweyn waa awood u yeesho in aan wax ka beddelno waxa dhici doona markaan riixno widget-ka iyadoo ay jiraan tallaabooyin suurtagal ah oo ka bilaabmaya bilowga barnaamijka saacadda, daminta shaashadda ama furitaanka barnaamij cayiman.
Qalabka saacad weyn
Iyada oo dhammaan xulashooyinkaan iyo suurtagalnimada in aan awoodno in aan dhigno dhowr wijitro shaashadda ah si loo xakameeyo heerkulka kala duwan ama waqtiga gobollada kala duwan ee meeraha, waxaa na soo foodsaaray widget weyn. ACW Clock Widget waxay ku jirtaa xaalada beta waana lagala soo bixi karaa bilaash ka dukaanka Play. Qalab xiise leh oo beddeli kara midka ku xirnaa Android-kaaga bilo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » ACW: Amaze Clock Widget, widget saacad bilaash ah oo loogu talagalay Android-kaaga oo aadan ka maqnaan karin
The Condle classic Oddworld: Cadhada Shisheeyaha waxay u timaadaa Android inkasta oo hada kaliya laga helo Amazon